संशोधन विधेयक थाती राखेर चुनाव हुँदैन - Karobar National Economic Daily
संशोधन विधेयक थाती राखेर चुनाव हुँदैन
query_builderJanuary 1, 2017 10:56 AM supervisor_account visibility873
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. नारायण खड्का शालिन र बौद्धिक नेताका रूपमा परिचित छन् । राजनीतिक विषयसँगै आर्थिक विकास र परराष्ट्र मामिलामा समेत राम्रो दक्खल राख्ने खड्का अहिले कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य र व्यवस्थापिका संसद्का सदस्य छन् ।
लोकतन्त्रमा हरेक विषयको समाधान खोज्ने सर्वोच्च निकाय संसद् नै भएको बताउने उनी अहिले भइरहेको संसद् अवरोधप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् । आफूलाई बाहेक अरूलाई अराष्ट्रवादी देख्ने एमाले दृष्टिकोण गैरजिम्मेवार रहेको भन्दै उनले मधेसी जनता सबैभन्दा बढी राष्ट्रवादी भएको बताए ।
संसद्मा विषय प्रवेश भइसकेपछि संसद्बाटै समाधान खोज्नुपर्ने र त्यसबाट भाग्न नहुने डा. खड्का बताउँछन् । प्रमुख तीन दल संशोधन विधेयक थाती राखेर निर्वाचनमा जाने विषयमा सहमतिनजिक पुगेको भनिएका बेला नेता खड्का भने संशोधन विधेयक थाती राखेर निर्वाचन हुन नसक्ने बताउँछन् ।
कांग्रेस नेता खड्कासँग जारी राजनीतिक गतिरोध, संविधान कार्यान्वयनका चुनौती र राजनीतिक अस्थिरताका प्रभावलगायतका विषयमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी जगन्नाथ दुलाल र तीर्थराज बस्नेतले गरेको कुराकानी:
संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेपछि दलहरूबीच ध्रुवीकरण बढेको छ, निकास के देख्नुहुन्छ ?
संशोधन विधेयक दर्ता भइसकेपछि दलहरूमा कृत्रिम राष्ट्रियताको विषयलाई लिएर ध्रुवीकरण बढेको छ । अत्यन्त संवेदनशील र अप्ठ्यारो समयमा दलहरूबीच धु्रवीकरण सुरु भएको छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र केही साना दलले राष्ट्रियताको नारा दिँदै संशोधन विधेयकले राष्ट्र विखण्डन हुन्छ, स्वाधीनता मेटिन्छ भन्ने नाममा त्यही राष्ट्रमा बस्ने एक समुदायका जनतालाई लक्षित गरेर विरोध गरिरहेका छन् । यदि संशोधन प्रस्ताव असफल भयो भने एमालेले जुन मुद्दाको विजारोपण गरेको छ त्यसले भोलि तराई मधेस र हिमाल पहाडका जनताबीच द्वन्द्व निम्तन सक्छ ।
उनीहरूले हामी राष्ट्रवादी हौं र अरूचाहिँ विखण्डनकारी हुन् भनेर जुन किसिमले कुरा गरिरहेका छन् त्यो एकदमै खतरनाक छ । एमालेलाई मैले एउटा जिम्मेवार पार्टीका रूपमा हेरेको थिएँ । त्यस्तो पार्टीले यस्तो मुद्दा उठाउनु देशकै लागि घातक कुरा हो ।
अहिले दलहरूबीचको विवाद समाधानका लागि द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, चौपक्षीय वार्ता भइरहेका छन् । वार्ताले निकास पनि निकाल्ला । तर, अन्ततः अहिले एमालेले जुन मुद्दाको बीजारोपण गर्‍यो त्यसले भोलि तराई–मधेसका नेपाली नागरिकलाई कता–कता अराष्ट्रवादी बनाउनेछ ।
अहिले दर्ता भएको संशोधन विधेयक संसद्को कार्यसूचीमा पनि प्रवेश गरेको अवस्था छ । त्यसप्रति भएका विरोध र अराष्ट्रवादी भनेर भन्नु राजनीतिलाई अप्ठ्यारो मोडमा पुर्‍याउन खोज्नु हो । यो विषयमा एमालेलगायतका पार्टीहरूले सुझबुझपूर्ण ढंगले अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालमा बसोबास गर्ने सबै जातजाति, धर्मावलम्बी, तराई, पहाड, हिमालमा बस्ने सबै नेपाली हुन् भन्ने हिसाबले अघि बढ्ने समय आएको छ । हिमाल, पहाड र तराईमा बस्ने सबै नेपाली हुन् भन्ने भावनाविपरीत अहिले एमालेले राजनीति गरिरहेको छ । यो दुःखद कुरा हो ।
राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेको देखिएन नि ?
राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पहल गरिरहनुभएको छ । शुक्रबार पनि मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभयो । सकारात्मक कुरा भएका छन् । संशोधन विधेयकमा ५ नम्बर प्रदेशका कुरा छन् । ५ नम्बर प्रदेशको कुरामा हाम्रै साथीहरूको पनि असहमति छ ।
तर, संशोधन गर्ने भनेर सरकारले विधेयक दर्ता गरिसक्यो । अब यस विषयमा सदनमै टुंग्याउनुपर्छ । यसलाई पास वा फेल जे गरे पनि संसदीय प्रक्रियाका माध्यमबाट गरौँ । संसदीय प्रक्रियाबाट बाहिर सडकमा आएर छचल्काउनु र सदनलाई पनि अवरोध गरिरहनुले लोकतन्त्रप्रतिको कमिटमेन्ट नभएको देखाउँछ ।
जहाँ लोकतन्त्रप्रतिको कमिटमेन्ट हुँदैन त्यहाँ जहिले पनि अस्थिरता भइरहन्छ । हामीले पटक–पटक गरेका आन्दोलनको बटमलाइन भनेको संसदीय अभ्यास पद्धतिका लागि हो । अहिले सार्वभौम सम्पन्न त्यो संस्थालाई अवमूल्यन गरेर त्यहाँ आएका मुद्दालाई छलफल नै गर्न नदिने हिसाबले जे भइरहेको छ, त्यसले हाम्रो लोकतन्त्रप्रतिको कमिटमेन्ट रहेनछ भन्ने देखाउँछ ।
यसलाई हेर्दा त हामीले हावाका भरमा गणतन्त्र, संघीयता ल्याएछौं भन्ने देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि ५ नम्बर प्रदेशको विषयमा गम्भीर बहस नभएकै हो । हाम्रा मधेसका साथीहरूको भावना पनि के थियो, छलफल गर्नु जरुरी थियो । ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन र भावी संघीयताको प्रारूप कसरी जान्छ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपथ्र्यो । त्यो गर्न सकेका छैनांै ।
संसद्लाई सार्वभौम र सर्वोच्च निकाय भनिरहँदा विषय संसद्मा लैजाने तर विषयान्तर गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो हाम्रो गैरजिम्मेवारपन हो । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गम्भीरताका साथ संसद्मा प्रवेश गराए । छलफल पनि भयो तर अझै पूर्ण भइसकेको छैन । संशोधनको विषय आएपछि त्यो मुद्दा कता हरायो ?
त्यसपछि संशोधनको मुद्दा ल्याइयो, त्यो मुद्दामा पनि प्रतिपक्षी र केही साना दलले छलफल हुन दिँदैनौ भनिरहेका छन् र सत्तारूढ दलहरूले मधेसवादी दलहरूको माग सम्बोधन गर्ने मात्रै नभएर सबैको स्वामित्व बोध गराउनका लागि संशोधन विधेयक ल्याइएको संशोधन फिर्ता लिँदैनौं भनिरहेका छौं ।
संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ र लिन हुँदैन भन्नेका बीचमा तिक्तता पनि बढेको छ । सरकारले यो मुद्दा अघि बढाएपछि त्यत्तिकै फिर्ता लिनु हुँदैन र यसलाई थाती राख्न पनि हुँदैन । यसलाई थाती राखेर चुनाव हुँदैन । यसलाई थाती राख्ने हो भने मधेसमा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन हुँदैन ।
यसै पनि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा मधेसी दलहरू विपक्षमा देखिएका छन् । फेरि संशोधन विधेयक पनि थाती राखेर जान सम्भव छैन । यो विधेयकलाई सफल अथवा सफल के बनाउने हो, व्यवस्थापिका संसद्ले गर्नुपर्छ । यस विषयमा निकास दिने बाटो एमालले खोज्नुपर्छ ।
उसले आफूलाई लोकतन्त्रवादी पार्टी भन्ने ठान्छ भनेर निकासको बाटो पहिल्याउनुपर्छ । उसले यदि अहिले पनि संसद् भनेको पुँजीवादीहरूको छलफल गर्ने थलो हो भनेर माक्र्स र लेनिनलाई सम्झेर एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली र एमाले नेताहरू बस्ने हो भने एमाले लोकतन्त्रवादी होइन रहेछ भनेर बुझ्ने दिन आउँछ ।
यदि संसद्बाट यो मुद्दा टुंगो लागेन भने एमालेले जुन विदेशी शक्तिको चलखेलको आशंका गरेको छ, त्यो अझ बढी प्रभावकारी, प्रभावशाली र हावी हुन्छ । यो मुद्दा संसद्भित्र प्रवेश नगराए बाहिरबाहिरै हल्ला मात्र गर्ने हो भने एमालेले नदेख्ने शक्तिहरू पनि यहाँ हावी हुन्छन् ।
मधेसको माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले विधेयक ल्याएको छ । संशोधन विधेयक राष्ट्रिय एजेन्डा नभएको भन्दै एमाले छलफलका लागि तयार देखिँदैन । यसले दलहरू मुठभेडउन्मुख छन् भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ नि ?
यदि यो मुद्दालाई छलफलमा नल्याउने हो भने स्थिति भयावह हुन सक्छ । यो पास वा फेल जे भए पनि छलफल हुनुपर्छ । यो मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर ५०/५५ भन्दा बढी मानिसले रगत बगाएका छन् । हाम्रो खुला सिमाना, भूराजनीतिक अवस्था हेर्दा भोलि त्यहाँ अर्को आन्दोलन भयो भने एमालेले त्यसलाई थेग्न सक्छ ? भूराजनीतिक अवस्थाको परिधिभित्र आन्दोलन भयो भने सरकारले दबाएर दबिन्छ ?
त्यस कारणले समयमै यो मुद्दामाथि छलफल गर्नु जरुरी छ । मधेसी दलहरू पनि राष्ट्रवादी हुन् । भारतसँग मधेसी जनताको सांकृतिक, वैवाहिक सम्बन्ध छ यो सत्य हो । तर, त्यसो भन्दैमा उनीहरू अराष्ट्रवादी हुन् भन्न मिल्दैन । मधेसीलाई अहिले हामीले अराष्ट्रवादी भनिरहने र भोलि त्यहाँ आन्दोलन भयो र उग्र रूप लियो भने के गर्छ एमाले ? के गर्छ सरकार ? मधेसी जनता पनि पहाडे र हिमालमा बस्ने जनताजत्तिकै हुन् ।
बीपी कोइरालाले राष्ट्रभक्तिको भावना पहाड र हिमालमा बस्ने जनताको भन्दा उच्च छ भन्नुभएको थियो । उनीहरूको राष्ट्रभक्ति नबुझेर पूर्वग्राही ढंगले कुरा गर्नु न्यायोचितपूर्ण होइन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन भनेर एमालेले भ्रमपूर्वक कुरा गरिरहेको छ ।
संविधानको धारा २७४ को १ मा राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमता असंशोधनीय हुन् भन्ने छ । धारा २९६ को ४ र ३ मा हेर्दा अहिलेको व्यवस्थापिका संसद्ले अर्को निर्वाचन नभएसम्म काम प्रदेश सीमांकनको विषयमा निर्णय गर्न सक्छ भनेर भनिएको छ । अहिलको संसद्लाई धारा २७४ को १ बाहेक दुईतिहाइले जे पनि गर्न सक्ने अधिकार छ ।
एमालेले संशोधन विधेयक संविधानविरोधी भन्नु संविधानप्रतिको उसको अबुझाइ हो कि ? संसद्को अधिकार क्षेत्र नबुझेर हो कि ? गलत प्रचार भइरहेको छ ।
सत्तारूढ र प्रतिपक्षी आआफ्नो अडानमा कायम रहँदासम्म संसद् खुल्ने सम्भावना देखिँदैन । संसद्लाई कहिलेसम्म बन्धक बनाइराख्ने ?
ढिलो–चाँडो अहिले संसद् अवरोध गर्ने दलहरूले पनि सुझबुझपूर्ण ढंगले निर्णय गर्छन् । अलिकति पनि देशभक्ति उनीहरूमा छ भने उनीहरू संसद् अवरोध हटाउने विषयमा गम्भीर बन्छन् । देशभक्ति र राष्ट्रियता एउटै क्याटोगरीमा राख्ने हाम्रो गलत बुझाइ छ । यहाँ कुनै पनि देशको विरोध गर्नु नै राष्ट्रियता हो भन्ने बुझाइ छ ।
हामीलाई यतिखेर चाहिएको भनेको देशभक्ति हो । राष्ट्रियता भनेको त हाम्रा साझा राष्ट्रिय झन्डा, भाषा, सगरमाथालगायतका सिम्बोलहरू हुन् । अहिले यहाँ भारतको विरोध गर्नेबित्तिकै राष्ट्रवादी भइन्छ भन्ने खालको अत्यन्तै दिग्भ्रमित व्याख्या गरिएको छ, यो पनि गलत हो ।
त्यसैले ढिलो–चाँडो एमालेलगायतका पार्टीहरूले जति ढिला भयो त्यति मुलुक अनिर्णयको बन्दी हुन्छ । यसको छिनोफानो गर्ने अन्तिम थलो व्यवस्थापिका संसद् हो । संसद् अवरोध गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक चरित्र होइन । संशोधनमाथि छलफल गर्न नदिन संसद् अवरोध गर्दा मधेसमा बिस्तारै आक्रोश बढ्न थाले होलान् ।
स्वतन्त्र मधेस प्रदेश चाहिन्छ भन्ने मान्छेहरू जुर्मुराउन थाल्छन् । यस्ता किसिमका अतिवादलाई रोक्न संसद् अवरोध हटाउनु जरुरी छ । अहिले पूर्वराजाले जसरी विज्ञप्ति जारी गरे, त्यसलाई हेर्दा र संसद्मा राष्ट्रिय मुद्दामा छलफल हुन नदिँदा राजतन्त्र फर्कन सक्छ ।
यद्यपि त्यो सम्भावना अहिले देखिँदैन । बेलायत, फ्रान्सको इतिहास हेर्दा यस्तै प्रवृत्तिका कारण राजतन्त्र फर्किएको देखिन्छ । संसद्मा राष्ट्रिय मुद्दा छलफल हुन नदिँदा देश मुठभेडमा जान्छ र लोकतन्त्र खतरामा पर्छ र त्यसको मूल्य एमालेले चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।
२०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । निर्धारित समयमा तीन तहको निर्वाचन हुने सम्भावना छ ?
चाहने हो भने निर्धारित मितिमै तीन तहको निर्वाचन हुने सम्भावना छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र मतदाता नामवली तयारी गर्ने हो भने हरेक २/३ महिनामा चुनाव गर्न सकिन्छ । मुख्य आधार स्तम्भका रूपमा रहेका निर्वाचनका कानुन तथा निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक कर्मचारी र बजेट दिएपछि निर्वाचन हुन्छ ।
एक तहको निर्वाचन भएपछि अन्य निर्वाचनका बाटा खुल्छन् । वैशाख १५ भित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरायौं भने जेठमा प्रदेशको निर्वाचन गर्न सकिन्छ । जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व, राष्ट्रिसभाका कुरा पनि छन् । जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोग बन्न बाँकी नै छ ।
चाहने हो भने फटाफट काम गर्न सकिन्छ । नेपालकै अवस्थामा रहेका देशहरू आर्थिक समृद्धिको दिशामा लम्किसके, हामी खालि प्रयोग नै प्रयोगमा अल्झिरहेका छौं । हाल नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासक हुनुपर्छ भनेका छन् भन्ने सुन्दै छु ।
तत्कालीन जार शासनले शोभियत युनियनमा १५ वटा राज्य गाभेका थिए । २०औं शताब्दीका शुरुतिर लेखिएका लेलिन र स्टालिनका लेखहरु पढेर त्यसलाई परिमार्जन गरेर नेपालमा जातीय राज्यको प्रयोग गर्न खोजियो ।
यिनीहरूले जातीय राज्यको बीजारोपण गर्न सुरु गरेका थिए, त्यो सुरुवातमा केही नयाँपन थिएन, खालि पढेर सापटी लिएका थिए । खालि नेपाललाई अनेक बहानामा प्रयोग थलो बनाउने परिपाटी बसेर देश बन्न नसकेको हो ।
राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि निकास के देख्नुहुन्छ ?
अहिले सरकारले संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाएको छ । त्यो विधेयक असफल भयो भने मधेसी मोर्चाले कांग्रेस र माओवादीलाई दोष दिन मिल्दैन । सदनमा हाम्रो बहुमत पुग्दैन र फेल हुन्छ भनेर संशोधन अघि बढाउने दलहरूलाई उसले दोष दिन मिल्दैन । उसले एमालेसँग लड्नुप¥यो ।
संशोधन फेल भयो भने एमाले र मधेसवादी दलको मुद्दा हुन्छ त्यो । मोर्चाले निर्वाचनमा जानबाट रोक्न मिल्दैन । हामीले गम्भीरतापूर्वक प्रस्ताव ल्याएका छौं । संसद्को कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छ ।
भोलि छलफलमा आउला र दुईतिहाइबाट फेल हुन पनि सक्छ । त्यो बेला मधेसी दलले कांग्रेस र माओवादीलाई दोष दिएर निर्वाचन जाँदैनौं भन्न पाइँदैन । मधेसदी दलहरू संशोधन फेल भए पनि निर्वाचनमा जाने र जनताको बलबाट माथि आउनेतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ ।
लामो प्रतीक्षापछि जारी भएको संविधान कार्यान्वयन हुने वा नहुने आशंका कायमै छ । कतै संविधान नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने टिप्पणी भइरहेका छन् । तपाईंलाई के लाग्छ ?
हामी बडो अप्ठ्यारो अवस्थामा छौं । हामीले यसरी नै समय बर्बाद गर्दै जाने हो भने म देशको भविष्य अन्धकार देख्छु । हामीले भावी पुस्तालाई पनि अन्याय गरिरहेका छौं ।
भावी पुस्तालाई हामीले के हस्तान्तरण गर्ने ? अस्थिरताले गुज्रिरहेको देश हामीले भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने हो । अहिले सीमांकनको विषयमा एडजस्टमेन्ट गरेर अघि बढ्नुपर्छ । मधेस मात्रै समेटिएको प्रदेश विभाजन हुने र पहाडी समुदायलाई मधेसी समुदायले दुःख दिने अवस्था पनि म देख्दिनँ ।
मधेसमा पनि ठूलो संख्यामा पहाडे मूलका मानिस बसोबास गर्छन् । मिलेर बस्न सकिन्छ र देश बनाउन सकिन्छ भन्नेमा मधेसका नागरिक चिन्तनशील छन् । अब हामीले सबैको पहिचान र सबैको पहुँच स्थापित गर्ने हो । त्यसका लागि हामीले अलिकति खुला दिलले सोच्नुपर्छ । तर, अहिलेको यो वेगलाई हामीले रोक्नु हुँदैन ।
अहिले यो बेगलाई रोक्दा त्यसले अन्त हान्छ र भोलि अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्छ । त्यसकारण हामीले दीर्घकालीन सोच राखेर राष्ट्रको अस्मिता, स्वाधीनतालाई ध्यानमा राखी मधेस, पहाड र हिमालका जनता एकताको सूत्रमा बाँध्न सक्नुपर्छ । अहिले हामी सशंकित हुने अवस्था देख्दिनँ ।
राजनीति निर्वाचन संशोधन विधेयक संसद् अवरोध